mubvunzo Flight Factor Airbus A350-900 XWB
Mazvita wakagamuchira: 19
2 makore 2 ago #303 by Colonelwing
Nokuti vaya vari kutsvaka chii sowe yakanaka chaiyo uye aita A350 vanogarirei payware muoti.
I dont chandinoziva pamusoro kuti chigadzirwa ,, asi kubva chii ini haana kuverenga kudzokorora ,, zvinoita anotarisa zvikuru.
sarudzo yako ,, sezvo handina pedyo ukama naye kuti chigadzirwa taura pamusoro.
Zvichida mumwe munhu aigona zadza uye kutaura nezvazvo zvakawanda ,, sununguka kuita kudaro Gentelmen ...
2 makore 2 ago #304 by Dariussssss
Planes seiyi achaita kuenda mamwe Sims, kufanana P3D uye X-Plane ....
2 makore 2 ago #315 by JanneAir15
It anotsvaka zvakanaka Ndinofunga uye kuti ndaigona kuwana kuti nokuti ndakanga ndichitsvaka uyewo nokuda A350 akanaka uye ndinofunga izvi ndiye asi ndiri uyewo kutsvaka A380 akanaka. munhu aigona ndapota kureva ini kana chaunoziva zvakanaka Airbus A380 tichikwanisa kuwedzera liveries zvakare. Handisati akasika nyaya inonzi "Ndege vanorumbidza" saka kana uine pfungwa A380 ndapota ndiudzeiwo.
2 makore 2 ago - 2 makore 2 ago #321 by Colonelwing
Nice kusarudza kuti Airbus A350-900 XWB na Janne ,, yeuka zvinoitirwa XPlane uye haisati nokuda FSX
Just nechokwadi befort tenga une XPlane Sim ...
Hapana zvishoma Ndinofunga kuti zvinoshamisa kuti kunyange pasina chimwe officical unongotaura Gwaro akabudiswa asi Flight Factor akakwanisa kudhonza nayo uye vakatanga zvakakwana tendeka A350 kuti X-ndege. Ndiri kutarisira kuti akatevera reserved pamusoro aicraft ichi. Handizive mugore zvakataurwa FSX / P3D vanoshandisa vachakwanisa kubhururuka ane Airbus A350.
Last edit: 2 years 2 months ago by Colonelwing.
2 makore 2 ago #323 by JanneAir15
Mhoro! Ndinokutendai nokuti ruzivo nekuti ndine FSX asi pane A350 pedyo Aerosoft unomedurirwa FSX.
Nenzira zita rangu na Janne (kwete Jeanne) uye Handisi vakadzi!
2 makore 2 ago #324 by Colonelwing
Naizvozvo urombo ,, mashoko vave kururamiswa ...